Amidio vidy ambany, elektrofotor kalitao avo lenta miaraka amin'ny Sogears eran-tany
vidiny ambany, electromotor avo lenta miaraka amin'izao tontolo izao
Safidy elektromotor isan-karazany
Fandefasana electromotor avo lenta manerantany
Herinaratra misimisy kokoa
Manolotra vokatra elektromotor izahay. Mikaroha vaovao momba ny Electromotor. Mividiana vidiny ambany, electromotor avo lenta. Ny electromotor dia nihazakazaka teo ambanin'ny fepetra miasa mahazatra. Milamina ny zava-bitan'ny môtô, lehibe ny tselika, kely ny feo, ary tsara ny fanaparitahana ny hafanana. Amidy any an-trano sy any ivelany ny motera, miaraka amin'ny famaritana ny vokatra sy ny fiantohana ny kalitao.
Izahay dia manome vokatra elektromotor avo lenta amin'ny vidiny tsara indrindra avy amin'ny motera elektrika sinoa voamarina, Stock of electromotor rotor ary afaka mandefa ny maodely isika raha mila sary teknisianina. Orinasa famolavolana injeniera elektrika matihanina, manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny Large Electromotors, koa ny mpamily sy ny fifehezana electromotor, vahaolana ara-teknika feno ho an'ny tetik'asa indostrian'ny servisy, Fiara Fiaran-dalamby, solika sy gazy, fitrandrahana, simenitra, tanjaka herinaratra, Turbo, angovo Hydro, angovo angovo ary angovo, Vovoka sy plastika, metalyurgy, siramamy, ranomasina ary, fanamboarana sambo, fanodinana ary zavamaniry fanodinana, fitaovana milina. Ny votoatin'ny injeniera rehetra.
Manome vokatra avo lenta sy ambany izahay
AC Electromotors,, Clutch frein electromotors, electromotors miova amin'ny tendrony, electromotors malefaka avo lenta, electromotors porofom-pipoahana, electromotors indostrialy fefy telo, electromotors famolavolana an-dranomasina, haavon'ny axis hatramin'ny 112 mm ka hatramin'ny 560 mm, miaraka amin'ny tsela hatramin'ny 20 000 Nm. Fehin-tsarimihetsika tokana, karazana fampisehoana: 40 W - 500 kW, flanges output: IMB 14, IMB 5. fahombiazana avo lenta.
Ny motera ataontsika dia ampiasaina amin'ny fampiharana marobe toy ny indostrialy, fambolena, lamba, fitaovana kely, mandeha ho azy, mpanasa vilia, jiro amin'ny lampihazo, sns. Manaparitaka ireo ampahany electromotor sy fanodinana, fitrandrahana fanodinana varahina.
Bebe kokoa amin'ny vokatray
Teknika elektromotor miaraka amina boaty boaty
Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mifandray aminay, faly izahay manampy anao!
NER Group dia niasa nandritra ny taona maro tamin'ny fanamboarana motera ho an'ny serivisy fitakiana takiana amin'ny tetikasa maro. Ny orinasantsika ifotony dia mamatsy karazana Electromotors isan-karazany ho an'ny orinasa indostrialy. Miantehera aminay ho mpanome herinaratra anao. Hiara-manao izay tena zava-dehibe indrindra isika.
Misy motera maro samihafa eto. Motera maotera haingam-pandeha haingam-pandeha maharitra motera AC, maotera mandeha AC, sns. Ny casing ivelany dia vita amin'ny famonoana maty maty. Ny flange sy ny casing ivelany dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fitaovana milina mandeha ho azy mba hanatsarana ny lanjany sy ny enta-mavesatra. Kely ny fikororohana, ny hafanana dia miteraka hafanana ambany ary mihatsara ny fiainam-panompoana.
Manontania anay izay ilainao